AU Inosendeka Parutivi Gakava Riri muZimbabwe?
Ndira 25, 2011
Zimbabwean President Robert Mugabe, right, chats to Prime Minister Morgan Tsavangirai during their end of year press conference at State House in Harare, saying they were dispelling rumors of disunity in the Government of National Unity, Dec. 20, 2010
Masangano akazvimirira oga aakaenda kuAddis Ababa, Ethopia, kunogadzirira musangano mukuru weAfrican Union anoti haasi kufara kuti nyaya yeZimbabwe haisi kunyatsozeyiwa kunyange hazvo zvinhu munyika zvisina kumira zvakanaka.
Masangano ane chitsama achitungamirwa neCrisis in Zimbabwe Coalition, ave nesvondo rose achiedza kuti nyaya yeZimbabwe ikurukurwe neAU.
Asi vakuru vesangano renyika dzemuAfrica vanoti nyaya dziri kuda kubatwa nechimbichimbi inyaya yeIvory Coast, Somalia neTunisia. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika idzi sezvo pasina kuwirirana panyaya yehutungamiri.
Munyori weAU, Ambasador Jean Mfasoni, vanoti muZimbabwe mave nani pari zvino nekudaro haisi nyaya inoda kubatwa pari zvino.
Masangano akazvimirira oga anoti aida kuti AU neSADC dzitume nhumwa kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika, sarudzo dzisati dzaitwa.
Mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMcdonald Lewanika, vanoti vanofara havo kuti dambudziko reIvory Coast rigadziriswe sezvo zvichipawo gwara rakajeka kuZimbabwe iyo ingangoitawo dambudziko revanhu vanorambira pachigaro.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, havasi kudhonzera pamwe chete nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, muhurumende yemubatanidzwa kubva zvayaumbwa muna Kurume 2009.
VaTsvangirai vari kugara vakagunun'una kuti VaMaugabe vari kuita zvehumbimbindoga muhurumende vachityora chibvumirano cheGlobal Political Agreement, icho chinovasungira kuti vawirirane pakuita basa repamusoro muhurumende.
Muyananisi wegakava remuZimbabwe, VaJacob Zuma, vanova zvakare mutungamiri weSouth Africa, vari kuedza kugadzirisa makakatanwa evaviri ava, asi vanenge vari kukundikana.
Hurukuro naVaMacdonald Lewanika